Ku Xigeenka Xeer Ilaaliyaha Qaranka oo xilkii laga qaaday, loona jaray warqad xarig ah – SBC
Ku Xigeenka Xeer Ilaaliyaha Qaranka oo xilkii laga qaaday, loona jaray warqad xarig ah
Guddiga adeega garsoorka ee maxkamada sare ayaa go’aan ku gaaray in xilkii ka qaadaan mid ka mid ah ku xigeenada xeer ilaaliyaasha qaranka oo lagu magacaabo Cali Max’ed Yuusuf oo ku magac dheer Cali Yare.
Guddoonka maxkamada Sare ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay Cali Yare in uu lunsaday lacag gaaraysa 100,000 oo dollar iyo in uu ku takri falay xafiiska xeer ilaalinta asaga oo si sharci daro ah u iibiyay dhul dad ay leeyihiin, si aan sharci aheyn u qoray warqada uu ku doonayo in uu kusoo xero mas’uulyiin ka tirsan dowladda KMG.
Cali yare oo eedaha loo heysto ay aad u fara badan yihiin ayaa sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyay in uu ka aruursaday lacago badan dad si uu u qoro waraaqo sharci daro ah kuwasoo ay ku jiraan warqado ka dhan ah mas’uuliyiinta dowladda iyo bahda saxaafadda oo uu dhowr jeer ku handaday uuna qoray warqado ka dhan ah Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ.
Go’aanka guddiga adeega garsoorka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu ogolaaday madaxweyne Sheekh Shariif sidaa darteedna xilkii uu ka hayay xeer ilaalinta qaranka looga qaaday.
Wararka magaalada Muqdisho naga soo gaaraya ayaa waxaa ay sheegayaan in Cali yare uu waayay xasaanadii loona jaray warqad soo qabasho ah.
Maxkamada sare ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa in ay bilowdo dhageysida dacwadaha loo heysto Cali Yare taasi oo bilaaban doonto shanta bisha Juun.
Eedeysane Cali Yare ayaa la sheegay in uu ku dhuumaaleysanayo magaalada muqdisho kadib markii warqada soo qabashada loo jaray, lagu wargeliyay ciidamada booliska iyo hay’adda nabad sugidda in ay soo qabtaan.
Hal booliyi nirig xalaala madhasho.awalba wiilashaa jeega xiirada ahi. Maslaxada ummadda iyo diinta midna danteed mawadin dhaqamada gaalada ayey fulinayeen.waxayna rabeen inay maalin taajir wada noqdaan shakhsi iyaga ka tirsan oo aan wax lunsana majiro.waxayna kawada simanyihiin ku caasida alaah.eega kan shariif lasoo gamey ee afka macaanaa xiligii maxkamadaha madiin la.aan baa haysa maya ee nolosha aduunyuu doortay suubanuhu.scw wuxuu yiri ninkii umadda masuuliyad uhaya ee khayaama janada xataa carafteeda mahelo inuu galo iska daaye.carafteeda amba uduga janadana waxa laga dareemaa 500 oo sano meel loo socdo fanacuudu bilaah nin xil ama amaano ku ordaya inuu wax khayaamo ayuu rabaa